Sajhasabal.com | Homeतपाईंको विचार सुन्दर छ भने ब्रह्माण्डको पोजेटीभ भाइब्रेसनसँग एकाकार हुन्छ
तपाईंको विचार सुन्दर छ भने ब्रह्माण्डको पोजेटीभ भाइब्रेसनसँग एकाकार हुन्छ
–ब्रह्मश्री मित्र | कात्तिक २७, काठमाडौं | हामीले आधुनिक ‘फिजिक्स’ र ‘क्वान्टम फिजिक्स’को बीचमा तुलना गर्दा ‘फिजिक्स’ले ‘ग्रस मटेरियल’को बारेमा अध्ययन गर्दछ भने ‘क्वान्टम फिजिक्स’ले सुक्ष्म र नदेखिने तरंगहरुलाई अनुसन्धान गर्दछ। यसरी ‘फिजिक्स’ र ‘क्वान्टम फिजिक्स’बीच मुख्य फरक यही नै हो।
‘क्वान्टम फिजिसिस्टहरु’ले गहिराइमा गएर अनुसन्धान गर्दा पूर्वीय दर्शन र योगलाई पनि हेर्ने गरेका छन्। उनीहरु के निचोडमा पुगेका छन् भने ‘कन्ससनेस इज युनाइटेड फिल्ड अफ अल द ल अफ नेचर’।
पहिले हाम्रो वेद र उपनिषदले पनि ‘एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति’ अर्थात् ब्रह्म एउटै मात्र छ, अर्को छैन। त्यसैगरी, ‘एक ओमकार सत्नाम’ पनि भनिएको पाइन्छ।
यी वैदिक व्याख्यालाई सामान्य तरिकाले जनमानसमा पुर्याउने काम त भइरहेको छ। पहिले भनिँदै आएको परमात्मा, परम चैतन्य, ब्रहम आदिलाई अहिले आएर विज्ञानले‘कन्ससनेस’कै रुपमा अध्ययन गर्दै आएको छ।
माइन्डको ल अफ नेचर, बडीको ल अफ नेचर, बायोलोजीको ल अफ नेचर अनि कस्मोलोजीको ल अफ नेचरलाई सञ्चालन र निर्देशन गर्ने भनेको ‘युनाइटेड फिल्ड अफ अल द ल अफ नेचर’ ले हो।
उहाहरणका लागि एउटा बच्चाको उदाहरण दिऔं–बच्चाले एउटा फूललाई हेरेपछि ऊभित्र सेन्सेसन पैदा हुन्छ, एक प्रकारको तरंग पैदा हुन्छ। त्यो तरंगमा ऊ प्रफुल्लित हुन्छ, खुसी हुन्छ। उसको भित्र त्यो फूलको लागि शब्द हुँदैन।
मानौं कि जब हामीले त्यो फूलका लागि लोटस भनेर शब्द दिन्छौं अर्थात् अन्य कुनै पनि प्रकारको फूलको नाम दिन्छौं। कन्ससनेसमा शब्दको तरंग पैदा हुन्छ। त्यो शब्दको तरंग पैदा हुने लेभल भनेको हाम्रो माइन्ड हो, त्यो तरंगले माइन्डलाई कसरी तरंगित गर्छ भन्ने कुराले हाम्रो ब्रेनलाई प्रभाव पार्छ।
कुनै दुई व्यक्तिबीच कुराकानी निरन्तर चलिरहँदा ब्रेनको न्युरो इलास्टिसिटी बढिरहेको हुन्छ। माइन्ड र स्प्रिटको जुन होराइजन छ, त्यसको आधारमा मानिसको ब्रेन कस्तो हुने त? भन्ने तय हुन्छ।
अहिले कुराकानी गरिरहँदा सूर्यबाट फोटोन्सहरु आइरहेको छ, कन्ससनेस र त्यसको बीचमा अन्तक्र्रिया भइरहेको छ, तरंगहरु फैलिरहेका छन्। विशाल आकाश अनि इथरिकल वल्र्ड छ, त्यससँग पनि कन्ससनेसले अन्तक्र्रिया गरिरहेको छ।
अहिले हामी पृथ्वीमा बसिरहेका छौं, करिब २ सय देशहरु छन्, ती देशहरुमा विभिन्न चिन्तनहरु भइरहेका छन् हरपल। ती सबै तरंगहरु कहाँ छन् भन्दाखेरि माइन्डको लेभलमा छन्।
यदि कोही व्यक्ति ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया’ भन्ने विचार धारणा गरेर बसेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सो व्यक्ति ब्रह्माण्डको पोजेटिभ तरंगसँग एकाकार भएको हुन्छ। इदि सुन्दर विचारलाई एकाकार गरेर बसेको अवस्था भयो भने त्यसले बडी, माइन्ड र सोललाई प्रभावित पार्छ।
यो पनि भन्न सकिन्छ कि ‘स्प्रिट मुभ्स द माइन्ड, माइन्ड मुभ्स द बडी एन्ड इट्स अल मेकानिज्म’। हामीले यो कुरालाई सुक्ष्म तरिकाले ध्यान गर्दै, साधना गर्दै अनि मौनतामा बस्दै हेर्नुपर्ने हुन्छ।
विचार भनेको के हो, बडी–माइन्ड मेकानिज्म के हो भन्ने पक्षलाई जब हामीले सही तरिकाले बुझ्छौं, त्यस्तो अवस्थामा मानिसले थोरै भए पनि मौनता प्राप्त गर्यो भने ती कुराहरु उसका लागि बोधगम्य हुन सक्छन्। यदि थोरै पनि मौनता छैन भने ती शब्दहरु उसले बुझ्न सक्दैन।
साना बच्चाहरुको कक्षा अर्थात् किन्डरगार्टेनमा गएर टिएस इलियट, विलियम शेक्सपियरको कथा पढाएको भने त उनीहरुले बुझ्दैनन्। त्यहाँ गएर थिअरी अफ रिलेटिभिटी, थिअरी अफ कज एन्ड इफेक्ट पढायो भने त कसैले बुझ्दैन।
जीवन सुक्ष्म शक्तिलाई नबुझ्नु संसारकै समस्या हो, मनुष्यताको समस्या हो अनि धार्मिक सम्प्रदायको समस्या हो। सुक्ष्म पक्षबाट सञ्चालित हाम्रा सुक्ष्म विचार र भावनालाई सही तरिकाले नबुझ्दाखेरि त्यसको प्रयोग हामीले भौतिक तरिकाले मात्र गर्दा खेरि मानिस अत्यन्त दुःखी र कन्फ्युजनको अवस्थामा रहेको स्थिति छ।
यसलाई समुचित तरिकाले बुझ्नका लागि हामीले हाँस्दै, गाउँदै र नाच्दै गहन कुरा गर्नुपर्छ। गोरखनाथले भन्नुभएको छ नि ‘हसिबा, खेलिबा, धरिबा ध्यानम्’। नाच्दै, हाँस्दै अनि मुस्कुराउँदै गहन कुरामा कसरी प्रवेश गर्ने? यो गम्भीर कुरालाई कसरी जोड्ने भन्ने बडो चुनौतीको कुरा छ।
यसलाई अभिव्यक्ति दिँदा पनि त्यति सहज र सरल त छैन। यो कुरा बुझ्नको लागि लेभल तयार पार्न नै गाह्रो छ।
खेतमा बाली लगाउनुपर्दा हामीले पहिले खेत जोत्छौं, त्यहाँ रहेर झारपात अनि ढुंगालाई यताउता राख्छौं। त्यसपछि मल राखेर मात्र हामी बीउ रोप्छौं। यसरी मात्र राम्रो खेती गर्न सकिन्छ।
त्यसै गरेर यो अध्यात्म विज्ञान, भौतिक विज्ञान, माइन्ड मेकानिज्म, ब्रेन मेकानिज्म, न्युरो मेकानिज्म, स्प्रिचुअल मेकानिज्म र क्वान्टम मेकानिज्म यी सबै कुरालाई संयोजन गरेर मानिसलाई मौनतामा लैजान जरुरी छ।
प्रचण्डले फेरि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नुको अर्थ के?